I-DIY 3D Printer, i-3D Material, i-3D Filament - i-TronHoo
Oomatshini bokukrola beLaser
IiFilaments zoShicilelo ze-3D
Emva kokuthengiswa kwePolisi
ITronHoo, enekomkhulu eliseShenzhen kunye namaziko okuvelisa eJiangxi naseDongguan. luphawu olutsha olugxile kwi-FDM/FFF 3D Printers, Resin 3D Printers, Laser Engraving Machines, kunye ne3D Printing Filaments. I-TronHoo, eyasekwa ngoogqirha, i-post-ogqirha kunye neenkosi kwiinkalo zenzululwazi yezinto eziphathekayo, ulawulo olukrelekrele, ubunjineli boomatshini, ifumene ukuqatshelwa kwayo kunye nokuthandwa ngoyilo lwayo, umgangatho wemveliso othembekileyo kunye nenkonzo enomdla ekhaya nakwamanye amazwe kumashishini anjalo. njengemveliso ye-R&D, ukwenziwa komngundo, izixhobo zokusebenza, isayensi yezonyango, ulwakhiwo, ubugcisa kunye nobugcisa, iimveliso zasekhaya, izincedisi kunye njl.
IiFilaments zokuprintwa kwe-3D
I-TronHoo BestGee T220S yi-desktop ye-FDM/FFF 3D umshicileli ovumela abasebenzisi ukuba babe nobuchule obungakumbi. Linqanaba lomshicileli we-3D wenqanaba labathengi kunye nokusebenza okukhulu koshicilelo kunye nokuchaneka...
I-TronHoo BestGee T300S Pro yi-desktop ekumgangatho ophezulu we-FDM/FFF 3D umshicileli wabathengi. Yimshicileli osebenzayo we-3D ojolise ekuncedeni abadali ukuba benze kwaye baprinte ngendlela ekrelekrele, elula kwaye...
I-TronHoo BestGee T220S Pro yiprinta ye-desktop ye-FDM/FFF ye-3D esebenza ngokuqaqambileyo kubathengi. Yintsimbi-isakhelo semodyuli yesakhiwo somshicileli we-3D efuna ii-eas...
ILaserCube LC100 ILaser ephathwayo
I-Tronhoo LaserCube LC100 ngumatshini wokukrola welaser ophathwayo. Le modeli encinci esongelayo yeTronhoo laser engraving series ixhasa uqhagamshelo lweBluetooth kunye neApp...
KinGee KG406 iDesktop yobuchwephesha
I-TronHoo KinGee KG406 yi-Professional Desktop resin 3D Printer. Lo mshicileli weLCD, owamkela ubuchwepheshe beVat Photopolymerization, uxhotyiswe nge-6” 2K Mono LCD...
[I-Silk-Like Feel] Umphezulu wesilika ocwebezelayo onesilika, unika umzobo ogudileyo, onjengeperile kunye nokwahlukileyo. Into Eprintiweyo ye-3D eGqithiweyo eneSilikhi ekhazimlayo ngenkangeleko egudileyo, ilungele ubugcisa, ubugcisa...
[Ivumba elingaphantsi, i-Warping encinci] I-Filament ye-TronHoo ye-ABS yenziwe nge-resin ye-ABS ye-bulk-polymerized, enomxholo ophantsi kakhulu oguquguqukayo xa kuthelekiswa neentyantyambo ze-ABS zendabuko. I-ABS yi...
[I-Filament ye-PLA ye-Premium] I-TronHoo PLA 3D i-filament isebenzisa imathiriyeli ecocekileyo ephezulu enokucutheka okuphantsi kunye neempawu ezintle zokubopha umaleko, ukuhlangabezana neemfuno zakho zoshicilelo olwahlukileyo...
Uphononongo lwe-TronHoo kwi-3D Printing Tech...
Sekuyiminyaka emine ukususela ekubeni i-TronHoo yasungulwa yi-CEO uDkt Shou e-Shenzhen. Njengoko inkampani ikhula kwaye yandisa ...
I-TronHoo Ityhila Ushicilelo lwe-Thermochromic 3D...
I-TronHoo, ibhrendi entsha yetekhnoloji yoshicilelo ye-3D, iyavuya ukwazisa ukuba inkampani iza kutyhila i-thermo...
I-TronHoo Ikhawulezisa i-3D yayo yoShicilelo lwe-Innov...
I-TronHoo, isekelwe kwiitalente zetekhnoloji ephezulu kwiinkalo zenzululwazi yezinto eziphathekayo, ulawulo olukrelekrele, injineli yoomatshini...
I-TronHoo ifuna i-Dialer / Distributor / i-Reseller Cooperation. Ngophuhliso lwetekhnoloji yoshicilelo lwe-3D, abashicileli be-3D bayathandwa kakhulu kwaye bafikeleleka kumntu wonke. Ukuzisa itekhnoloji yoshicilelo ye-3D kubomi bomntu wonke, kwaye wenze abadali basebenzise ngcono iiprinta ze-3D, iTronHoo ijonge abathengisi, abasasazi, kunye nabathengisi kwihlabathi liphela! Okwangoku, abathengi bethu bagubungela yonke imisebenzi kunye norhwebo, njengabathengisi, abathengisi, iingcali zemfundo, abavelisi, iifektri, njl.njl. Njengenkokeli entsha yetekhnoloji yoshicilelo lwe-3D, sihlala sithatha umgangatho njengento ephambili, sigxininise ekwenzeni olona shicilelo lwe-3D lungcono. iimveliso ezinomsebenzi ophezulu. Nokuba uzimisele ukuqalisa ishishini lakho kwindawo yoshicilelo ye-3D, okanye unezimvo ezilungileyo malunga nabashicileli be-3D okanye ezinye iimveliso zabadali. Wamkelekile ukuba uzibandakanye nathi.
Igumbi 516, iBlock B, Hangcheng iSecurity Industrial Park,
ISithili saseBao'an, eShenzhen, eGuangdong, ePR China
© Copyright - 2020-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. I-Shenzhen TronHoo Intelligent Technology Co., Ltd.